Ny tranokalanao dia mivarotra ny vokatrao sy ny serivisinao?
Carl-Henry-Internet-Ahoana no-to-nametraka-up-an-tserasera-business_basic-varotra-lantonoaraTokony hivarotra ny vokatrao na ny serivisinao ny tranokalanao, antsointsika hoe "rafitra varotra an-tserasera" na "Sales Funnel". Ny sary eto dia mampiseho anao ny rafitra voalohany voalohany (tsindrio ilay sary mba handefasana PDF) izay azo hatsangana ary haorina. Tsy maintsy manana an online business system Mba hahombiazan'ny e-commerce amin'izao andro izao, dia mila manatona fomba matihanina amin'ny fampiasana modely fananana efa misy ianao.
Ny rafitra momba ny raharaham-barotra an-tserasera - Misy fomba maro samihafa hametrahana ny rafitra an-tserasera izay hifampidinika any an-kafa. Manana safidy 3 ianao; Mitadiava olona iray hanehoana anao ny fomba hanaovana izany, ento olona iray hanao izany miaraka aminao na misy olona iray hametraka izany ho anao.
OLONA - mila mieritreritra ny momba anao hoe iza ny mpihaino anao, inona ny lohahevitra hitranga aminao (ny Niche anao), misy vondron'olona marobe izay liana handoa vola ho an'ny vokatrao? Ny antony iray lehibe momba ny vokatra na serivisy dia ny mamaha "olana" na "filàna" ho an'ny mpanjifanao, ny asanao dia ny hamantatra io olana na ilana anao io ary manolotra "vahaolana" (ny vokatrao / serivisy) rehefa nanapa-kevitra ianao, aorian'ny manatanteraka ny ilaina ilaina dia mila miantso an'ity vondrona ity ianao (Làlam-pifamoivoizana) ary mitarika azy ireo amin'ny pejy voalohany (Landing Page na Pejy Optin).
LANDING / OPTIN PAGE - Ity no fifandraisana voalohany izay ho azonao amin'ny mpanjifa tianao, manana fotoana voafetra ianao hisarihana ny sain'izy ireo. Ny fomba iray dia ny manome azy ireo fampahalalana mahasoa sy / na sarobidy amin'ny endriky ny fanomezana maimaim-poana, fanentanana ho azy ireo hanome anao ny adiresy mailaka (Tena zava-dehibe izany).
FREE GIFT - Tokony ho olana mitovy amin'ny vokatrao, tokony hanolotra ny fotoana hahatongavan'ireo mpanjifa ho anao hahita valiny haingana eo amin'ilay vahaolana tadiaviny izany. Ao anatin'ny fanomezana maimaim-poana dia hanana fanazavana momba ny fomba famahana ny olana na ny filànao ary ny rohy mankany amin'ny pejy fivarotana ny vokatrao. Ny fanomezana maimaim-poana anananao dia azo atolotra avy hatrany eo amin'ny "Misaotra Misaotra Pejy" na mailaka automatique.
SOSO-KEVITRA HAHATONGA ANAREO - Raha vao azonao ny fampidirana azy ireo ao anaty endrika optin dia hanana rafitra automatique ianao izay handefa mailaka misy fampahalalana fanampiny (An Autoresponder) ary mirakitra "Calls to Action" handrisihana azy ireo hitsidika ny pejinao mpivarotra sy chack. mivoaka ny tolotra omenao.
SALE PAGE - Hohazavaiko ny fomba hanomezan'ny varotra sy ny serivisy ny mpanjifa anao, tsy maintsy mamorona ity ianao mba hanazavana ny "WIIFM" (Inona no ilaiko). Tsy maintsy mijery tanteraka ny vokatrao amin'ny alàlan'ny mason'ny mpanjifanao ianao. Ny vokatra na fidirana amin'ny serivisinao dia eo noho eo raha eo amin'ny maha-digital azy na hanome toromarika momba ny dingana manaraka amin'ny alàlan'ny mailaka avy hatrany raha toa ka vokatra na serivisy ilay izy.
FANOMEZANA - Mila manana fomba fanangonana pejin-drakitra an-tserasera ianao tahaka ny PayPal na kaonty fivarotana amin'ny bankinao.